A na-ere Zenge maka € 0,10; mbụ na mara mma mgbagwoju anya | Androidsis
A na-ere Zenge na-akpali akpali na Play Store maka € 0,10
Kwa izu Google Play Store na-etinye ngwa na egwuregwu vidiyo nwere onyinye nke na-enwe ike itinye anyị n'ihu ọdịnaya dị elu na-akwụghị ụgwọ dị ukwuu. Ọtụtụ n'ime onyinye ndị a kwa izu bụ maka € 0,10, yabụ ọ bụrụ na ị nwere nguzozi dị mma maka nyocha ndị ahụ na Ụgwọ Ọrụ, ị ga-enwe nnukwu nhọrọ nke ịnweta ngwa adịchaghị n'ọnụ ahịa mbelata nke ukwuu.
N'izu a ọ bụ oge Zenge, ihe mgbagwoju anya mara mma nke na-etinye gị n'ihu n'ihu ọmarịcha anya. Site taa ị nwere ike nweta ịzụrụ egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya maka € 0,10 maka oge a na-enye. Egwuregwu na na-akwụkarị gị €0,99, yabụ na ị nọ n'oge zuru oke iji nweta egwuregwu vidiyo dị elu nke ị ga-etinye akụkụ ụfọdụ ọnụ dị ka a ga-asị na ọ bụ ezigbo egwuregwu.
Zenge na-etinye gị na akụkọ ihe mere eme nke naanị onye njem Eon site na mgbagwoju anya dị iche iche nke ị ga-ejikọta akụkụ niile n'usoro ziri ezi. Ị nwere ike ịtụgharị ma ọ bụ tụgharịa akụkụ ndị a ka e wee zie onyinyo ikpeazụ. Egwuregwu vidiyo iji zuru ike n'ụzọ dị egwu na nke nrụgide fọrọ nke nta ka ọ pụọ ka ịchọta onwe anyị tupu egwuregwu egwuregwu na-enye gị ohere iku ume nwayọ na-enweghị oge ma ọ bụ usoro ndị ọzọ.
Ọ bụ ugbu a ka emelitere ya na el Play Games onye ndu na nweta usoro mgbe onye nrụpụta ya kpebiri itinye ya na ọrịre na ọnụahịa nke € 0,10. Egwuregwu vidiyo na-akwụkarị € 0,99 na-enweghị micropayments n'ime ngwa ahụ, yabụ ị nwere ọdịnaya gị site na otu ịkwụ ụgwọ.
Zenge maara ka esi egwu kaadị ya nke ọma inye a nnukwu visual àgwà na egwuregwu egwuregwu nke, ekele maka ịnwale na ezighi ezi, anyị nwere ike dozie ihe mgbagwoju anya ọ bụla anyị nwere na njem a mara mma.
Zenge - Egwuregwu mgbagwoju anya mara mma
Developer: Hamster On Coke Egwuregwu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » A na-ere Zenge na-akpali akpali na Play Store maka € 0,10
Koush na-ebupụta Vysor na Storelọ Ahịa Play
Huawei Y6II bụ ama ọhụụ ọhụụ batara nwere ọdịdị nwatakịrị